GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Chichewa Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French German Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Turkish Ukrainian
Ọ̀ dị onye ga-agbagha okwu ahụ bụ́ na ihi ụra nke ọma n’abalị bụ isi ihe na-eme ka a nọgide na-enwe ezi ahụ́ ike? Ikekwe ọ dịghị onye ga-agbagha ya. Otú ọ dị, nye ọtụtụ ndị, ụra bụ ihe na-adịchaghị mkpa. “Ma ọ ga-abịara gị ụgwọ n’ụbọchị na-esochinụ,” ka Shawn Currie, bụ́ ọkà n’akparamàgwà mmadụ na osote prọfesọ na Mahadum Calgary, nke dị na Canada, na-ekwu. Ọ bụrụ na i highị ụra nke ọma, o yikarịrị ka ị ga-enwe ahụ́ mgbakasị karị, mgbe ụfọdụkwa ọbụna ị ga-enwe ịda mbà n’obi.
“Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na ụra na-eme ka ụbụrụ dịghachi nkọ, nakwa na a na-anọgide na-amụta ihe mgbe a na-ehi ụra,” ka akwụkwọ akụkọ bụ́ Calgary Herald, na-ekwu. Prọfesọ Currie na-ekwu, sị: “N’abalị, ị na-eme ka ikike ncheta gị dịkwuo nkọ, ihe ọ bụla ị mụtara n’ụbọchị ahụ na-abụ nke e chekwara nke ọma n’abalị. Ewepụtaghị oge iji zuo ike na-ebelata ikike ịmụta ihe n’ezie.” Ọ na-ekwukwa na “ọ bụrụ na i hie ụra nke ọma, ikekwe ọ ga-enye aka n’ụzọ ụfọdụ iji mee ka i nwee obi iru ala.”
Ya mere, olee ókè e kwesịrị ihiru ụra? Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na ọ bụ awa asatọ maka mmadụ nile, Currie na-ekwu, sị: “Otú ụra si adị ndị mmadụ mkpa na-adị iche iche.” N’ihi nke ahụ, ọ na-atụ aro ka a na-agbalị ihimi ụra ehimi. Ma olee otú a pụrụ isi mee nke a, karịsịa nye ndị na-adịghị enwe ike ihi ụra nke ọma? Lee aro ụfọdụ:
▪ Jiri mmiri dị ṅara ṅara saa ahụ́ tupu ị lakpuo.
▪ Nwee mmega ahụ́ n’ókè kwesịrị ekwesị ọtụtụ ugboro n’izu; ma enwela mmega ahụ́ siri ike tupu ị lakpuo.
▪ Mee ka ọnụ ụlọ ihi ụra gị dịrị jụụ, gbaa ọchịchịrị, ma jụtụ oyi.
▪ Gbalịa inwe otu oge ị ga na-ebili kwa ụtụtụ iji wee mee ka oge ị na-eji ehi ụra ma na-ebili mara gị ahụ́.
N’ihi abamuru ndị doro anya dị na ya, nwee ezi uche ma mee ka ụra soro n’ihe ndị dị oké mkpa nye gị.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọ Dị Mkpa Ka Ị Na-ehi Ụra nke Ọma!